Zụta SoundCloud Comments - SoNuker
Kedu uru m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m zụta ụda SoundCloud?
Nkwupụta na-eweta izi ezi na nnabata maka posts gị
Na-enyere aka kwalite ihe ndị ọzọ ị ga-ahapụ na posts gị
Na-enyere aka itinyekwuo gị aka dịka Mmasị & Nlele
Nwere ike ịhazi ihe ndị a haziri ahazi
SoNuker na-anapụtakarị ihe ị zụrụ
Kedu ihe kpatara m ga-eji zụta Comments?
Ọrụ a nwere ike inyere gị aka ma ị malite ịmalite mkparịta ụka na posts gị. Mgbe ị na-azụta Azịza, ha nwere ike ịhazi ya nke ọma ka ị nwee ike duzie mkparịta ụka ahụ n'ụzọ ịchọrọ.
Can nwere ike ịnwe obere ihe 5 kwuru ezigara na otu post. Ha nwere ike ịbụ azịza nye ndị ọzọ posts ma ọ bụ iji malite mkparịta ụka na otu isiokwu. Ha dịkwa ezigbo mkpa iji nyere aka kwado echiche na echiche gị.
SoNuker.com na-enye okwu kachasị mma dị na ntanetị. Anyị na-ekwupụta azịza gị na post gị niile.
Kedụ mgbe a ga-ewepụta Nkwupụta m ụda Sound mi?
Anyị na-akwado ọrụ anyị 100% anyị ga-anapụta usoro niile n'uju.
E tinyelarị SoundCloud na ụgbọ ibu gị.